बहुरूपिया कलाको आयाम र अवस्था- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
भारत वा विश्वस्तरमा बहुरूपिया कलाको नियमित फेस्टिभल आयोजन हुने गर्छ । सरकारी र गैरसरकारी स्तरमा यस्ता प्रयत्न थालिएका छन् । संसारभरिकै बहुरुपियाहरुको उत्सवमा सहभागिता भइरहेको छ । तर, नेपालका नगरहरुमा बहुरूपिया कलाकारको प्रदर्शन देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय उत्सव, महोत्सवमा प्रतिनिधित्व पनि छैन । यो कलाको क्षय हुनु भनेको महत्वपूर्ण सम्पदा गुमाउनु हो ।
जेष्ठ २२, २०७८ रमेश रञ्‍जन
म पाँच वर्षको नहुँदै पहिलोपटक बहुरूपिया हेर्न पाएको झिनो सम्झना छ । बाल्यावस्थामा कहिलेकाहीँ बुवाआमासँग गाउँबाट जनकपुर गइन्थ्यो । त्यतिबेला त्यहाँ हेरेको बहुरूपियालाई बिर्सेको छैन । मलाई डर लागेको थियो । रूप, त्यसको रंग, परिधान र शृंगार भयावह र अनौठो थियो ।
फाइल तस्बिर : दिनमान टाइम्स
काली, दुर्गा, महादेव, विष्णु, नारद, रावण र आफ्नो प्रेमिका लैलाका लागि पागल भएका प्रेमी मजनुको रूप धारण गर्न उनीहरु रुचाउँछन् । मैले पटकपटक बहुरूपियालाई यस्तो रूप धारण गरेको र कला प्रदर्शन गरेको देखेको छु । पहिलोपटक हेर्दा सम्भवत: कालीकै रूप हेरेको थिएँ । म आतङ्कित हुनुको कारण त्यसको भयावह रूप थियो । कालीको एउटै अनुहार हाम्रो चेतनामा स्थापित छ । लामो र रातो जिब्रो, कालो शरीर र अनुहार, कालो र जिंग्रिङ्ग कपाल, मानवमुण्ड माला, हातमा रगत तप्किरहेको खड्ग । बालमनलाई यस्ता विभत्स र भयावह रस निस्पादन गर्ने अवस्थाको सामना गर्न गाह्रो हुन्छ । मलाई पनि गाह्रो भएको थियो र त्यसैकारणले मेरो सम्झना र चेतनाले त्यो अवस्था र रूपलाई बिर्सेको छैन ।
बहुरूपी संस्कृत भाषाको शब्द हो । यसको अर्थ जीविका निर्वाहका लागि विभिन्न रूप धारण गरी स्वाङ गरेर मनोरञ्जन दिलाउनेलाई जनाउँछ । हुन पनि मनोरञ्जन गराएबापत पाउने बक्सिस तिनको जीविकाको आधार हो । कतिपयले यसलाई स्वाङ गरेर भिक्षाटन गरेको पनि भन्छन् । तर यसलाई भिक्षाटन भन्नु उचित हुँदैन । कला प्रदर्शन गरेर स्वेच्छाले पाउने पारितोषिकलाई भिक्षाको श्रेणीमा राख्नु अनुचित नै हुन्छ ।
बहुरूप धारणको कला पुरानो हो । धेरैजसो धार्मिक ग्रन्थ र धार्मिक मिथहरुमा रूप परिवर्तनका अनेकौंं सन्दर्भ उल्लेखित छन् । रावणले सीतालाई अपहरण गर्दा साधु भेष धारण गरेका थिए । विष्णुलाई तुलसीको सतीत्व भङ्ग गर्न जालन्धरको रूप धारण गर्नु परेको थियो । अहिल्यासँग शारीरिक सम्बन्ध बनाउन इन्द्र गौतम ऋषिको स्वरूपमा आएर भ्रमित पारेका थिए । कृष्णलाई त झन् ‘छलिया’ नै भन्छन् । रूप र चरित्र दुवै दृष्टिले छल गर्ने क्षमता भएकालाई नै छलिया भनिन्छ । हिन्दु धार्मिक साहित्य र कथा परम्परामा रूप परिवर्तनका हजारौं उदाहरण छन् ।
माथि उल्लेख गरिएका चरित्रहरुले रूप परिवर्तनका अधिंकांश घटनामा नकारात्मक चरित्रको उपस्थापन गर्छ । अर्थात् रूप परिवर्तन भ्रम छर्न, धूर्त्याइँ गर्न, ठग्न, धोका दिनलाई प्रयोग भएको देखिन्छ । धार्मिक पात्रहरुले रूप परिवर्तन गर्नुको मुख्य कारण छकाउने, धोका दिने, प्रत्यक्ष सामना गर्न नसक्नेसँग रूप परिवर्तन गरी प्रहार गर्ने वा हत्या गर्ने मनसाय रहेको देखिन्छ । देव र राक्षस दुवै संस्कृतिमा यी कला साधनाको परम्परा थियो । दुवै एकअर्काका प्रतिस्पर्धी थिए । दुवै पक्ष सुरक्षा र आक्रमणको सिद्धान्तको आधारमा बहुरूप प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
सामन्ती राज्य व्यवस्थाले अनेकौं कलाजीविहरुलाई जन्माएको र हुर्काएको उदाहरण इतिहासमा भेटिन्छ । सामान्तहरुको समाप्तिसँगै ती कलाजीविहरुले औचित्य गुमाउँदै गएको अवस्था छ । ती कलाजीविमध्येकै बहुरूपिया कला प्रदर्शन गर्ने एउटा समुदाय हो । जो भारत, पकिस्तान, बंगलादेश र नेपालमा कला प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । आधुनिक कलाकर्मीले यो विशिष्ट कलालाई आत्मसात् गरेर प्रयोगमा ल्याए पनि बहुरूपिया भनेको पारम्परिक रूपमा पुस्तैनी पेसाको रूपमा अपनाएका छन् ।
बिस्तारै बहुरूपिया हरुले कला प्रदर्शन गर्न छाडेको देखिन्छ । ‘मैथिली जिन्दावाद’ मैथिली भाषाको अनलाइन पत्रिकामा रवीन्द्र भारतीको एउटा सानो रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ, ‘जीविकोपार्जन लेल कलाक एक अद्भूत स्वरूप: बहुरूपिया एखन खजौलीमे ।’ यसको अर्थ हो– जीविकोपार्जनका लागि कलाको एउटा अद्भूत रूप: बहुरूपिया अहिले खजौलीमा । खजौली नेपाल–भारत सीमामा अवस्थित एउटा गाउँ हो । त्यस गाउँमा बहुरूपिया ले कला प्रदर्शन गरिरहेको समाचार प्रकाशन भएको रहेछ ।
समाचारमा सामान्य सूचना मात्र छ । कलाकारको नाउँ र ठेगानासमेत छैन । उनको रूप धारण र प्रदर्शनका विषयमा सामान्य जानकारी मात्र दिइएको छ । विराटनगरबाट प्रकाशित हुने यस पत्रिकाका सम्पादक प्रवीणनारायण चौधरीसँग बहुरूपियाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पत्रिकामा छापिएको आलेखभन्दा पनि बहुरूपियाबारे आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुभएको छ, ‘विराटनगरमा अहिले पनि प्रत्येका वर्ष बहुरूपिया आउने गरेको छ । हप्तौंसम्म नयाँनयाँ स्वरूपमा देखा पर्छ् । बहुरूपिया आउने समय दशैं, तिहारतिर हो ।’ मैले चौधरीसँग सोधेको थिएँ, विराटनगरमा प्रदर्शन गर्ने बहुरूपिया नेपालमै बसोबास गर्छन् कि बाहिरका हुन् ? उहाँसँग प्रस्ट जवाफ थिएन । तर नेपालमै बसोबास गर्ने बहुरूपिया उहाँको संज्ञानमा थिएन ।
नेपालजस्तै भारतमा बहुरूपिया को अवस्था छैन । भारतका धेरै प्रान्तहरुमा अहिले पनि बहुरूपिया कला जीवित छ । कलाकारहरु पनि पुस्तैनी रूपमा सो कलाप्रति अहिलेसम्म समर्पित देखिएका छन् । भारतको राजस्थान प्रान्तमा सघनरूपमा बहुरूपिया कला सुरक्षित छ । बीबीसी हिन्दीका जयपुर संवाददाता नारायण बारेठको राजस्थानी बहुरूपिया कलामाथिको न्युज रिपोर्टमा अत्यन्त चिन्ताजनक निष्कर्ष रहेको छ । उनको भनाइ छ, ‘अब यस कलाको श्वास अवरुद्ध हुने अवस्था छ ।’ राजपुतना शासन रहेको राजस्थानमा राजाहरुकै संरक्षणमा बहुरूप कलाले उत्कर्ष प्राप्त गरेको थियो । अहिलेको समाजमा आफ्ना मूल रूप बदलेर बाँच्नेहरुको संंख्या बढ्दै गएपछि बहुरूपिया कलाकारहरूप्रतिको आकर्षण घटेको हो । यस्ता टिप्पणीलाई असत्य भन्न सकिँदैन । यथार्थ: अहिलेको राजनीतिक वा समाजको नेतृत्व तहमा रहेकाहरुको चरित्रमा देखिने अस्थिरताबाट आमजनता पनि दिक्दार भएका छन् । तर बहुरूपिया कलाको औचित्यबारे यसप्रकारको निष्कर्षबाट सहमत हुन सकिँदैन ।
नेपालको प्रसङ्गमा बहुरूपिया कला र कलाकारहरुको अवस्थाबारे के भन्नु ? यसबारे सामान्य सूचनासमेत कसैले दिन सक्ने अवस्था छैन । वा कुनै सन्दर्भ सामग्री नै फेला पार्न सकिंदैन । यसको अर्थ बहुरूपियासँग नेपालको कुनै सरोकार नै छैन त ? नेपाली बृहद् शब्दकोषले नेपाली समाज यो शब्दबाट अपरिचित छैन भन्ने पुष्ट्याइँ गरेको छ । शब्दकोषमा बहूरूपी (सं.) जसको अर्थ विभिन्न रूप धारण गर्ने, अनेक रूपको अनुरूपी, जनसाधारणलाई विभिन्न रूपले भुलाउन सक्ने, समाजमा रहेर विभिन्न रूप देखाई जीविका चलाउने उल्लेख छ । यसले नेपाल र नेपाली जनमानस बहुरूपिया एउटा कला प्रदर्शक समुदाय हो भन्नेमा संशय राख्ने ठाउँ भएन ।
फाइल तस्बिर : बीबीसी हिन्दी
नेपालमा प्रदर्शन गर्ने बहुरूपिया कलाकारहरु नेपालमै बसोबास गर्थे कि भारतबाट आएर प्रर्दशन गरेर फर्कन्थे ? मलाई थाहा भएन यस प्रश्नको उत्तर कहाँबाट पाउने ? भारतका बहुरूपिया कलाका जानकारहरु भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशसँगै नेपालमा पनि बहुरूपिया कला रहेको उल्लेख गर्छन् ।
भारतमा हिन्दु र मुसलमान दुवै धर्मावलम्बीका बहुरूपिया कलाकार छन् । कुनै किसिमको धार्मिक सङ्किर्णता र विभाजन ती कलाकारहरुमा देखिँदैन । मुसलमान कलाकार हिन्दु प्रतीक र देवीदेवताको रूप धारण गर्न अप्ठ्यारो मान्दैनन् । हिन्दु बहुरूपी कलाकारहरु पनि मुसलमानहरुको पीर, फकीर र मुसलमान बादशाहहरुको रूप धारण गरी मज्जाले कला प्रदर्शन गर्छन् । अधिंकांश कलाजीवि जाति वा समुदाय तल्ला जाति भनिनेबाटै आउँछन् । बहुरूपियाले सामाजिक रूपमा पिँधमै रहको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन् । हिन्दु वर्ण व्यवस्थाभित्र जातीय विभाजनको प्रस्ट रूप अहिले पनि विद्यमान रहेको छ । इस्लामले जातीय स्वरूपलाई अस्वीकार गरेको छ ।
दक्षिण एसियाका मुसलमान र हिन्दु वर्ण व्यवस्थाद्वारा निर्धारित जातीय व्यवस्थाको प्रभावबाट उम्किन सकेनन् । कामको आधारमा जाति भन्ने हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको अवधारणा इस्लाम ग्रहणपछि पनि कायमै रहेको छ । वर्ण व्यवस्थाको भेदभावपूर्ण कुप्रभावबाट इस्लाम ग्रहण गरे पनि ती धर्मका सीमान्तहरु मुक्त हुन सकेनन् । छुवाछुत प्रस्ट रूपमा नदेखाइए पनि संभ्रान्त मुसलमानहरुको भिन्न वर्ग छ । दैनिक कार्य गरेर जीविका निर्वाह गर्ने निम्नवर्गका मुसलमानहरु वस्तुत: दलित नै हुन् । त्यसमा पनि कलाजीवि बहुरूपिया हिन्दु होस् वा मुसलमान दलित र अछूतभन्दा माथिको हैसियत राख्न सक्दैनन् ।
भारतमा हाल दुई लाख बहुरूपिया कलाकारको जीविका बहुरूपिया कला प्रदर्शनबाट भइरहेको बीबीसीका नारायण बारेठको रिपोर्टमा उल्लेख छ । बहुरूपिया कलाकारहरु यो कलालाई पुर्खाको नासो ठान्छन् । तर अब हिम्मत हारिसके, जति प्रयास गरे पनि उनका सन्तान यस कलाप्रति रुचि राख्दैनन् । यस कलाको कदर नहुने हुँदा भावीपुस्ता भविष्य पनि नरहने ठान्छन् ।
यी कलाकारहरुलाई आफ्नो इमान्दारीमाथि गर्व छ । राजस्थानका बहुरूपी कलाकार यासिनको (नारायण बारेठको बीबीसीमा प्रकाशित रिपोर्टमा आधारित) भनाइमा राजाहरुको रियासत हुँदासम्म बहुरूपीयाहरुको बडो इज्जत थियो । राजाहरुले यी कलाकारहरुलाई ‘उमरयार’ को उपाधि प्रदान गरेका थिए । यो जासुसको लागि सम्बोधन गर्ने शब्द हो ।
रियासतका लागि उनीहरु जासुसी गर्दथे । मुगल शासकहरुले विभिन्न कलाजीविहरुलाई जासुसको रूपमा प्रयोग गरेको इतिहास छ । विकल्पको रूपमा राजस्थानका राजपुत राजा र अन्य ठाउँका हिन्दु राजाहरुले पनि कलाजीविहरुलाई गुप्तचरको रूपमा प्रयोग गरेको हुनसक्छ । स्वाभाविक हो राज्यको लागि काम गरेपछि पारितोषिक पाउने नै भयो । उनीहरुले राज्यबाट विर्ताको रूपमा जग्गाजमीन पाएका उदाहरण पनि छन् । राजनीतिक संरचना परिवर्तनसंँगै ती कलाजीविहरु परिवर्तित भएर गए । राज्यको संंरचनामा ती कलाजीविहरु महत्त्‍वहीन हुँदै गए । तिनका योग्यता राज्यको लागि अनुपयोगीसिद्ध हुँदै गयो । तिनका निर्भरता राज्याश्रित नभएर जनाश्रित हुन पुग्यो ।
बहुरूपिया मुख्यत: व्यावसायिक कलाकार हुन् । यसमा पुस्तैनी पेशाको पुस्ता हस्तानान्तरण हुँदै आएको हो । पारम्परिक बहुरूपियाका अतिरिक्त बहुरूप धारण गर्ने कलाकारहरु पनि देखा पर्दैछन् । नेपाली चलचित्र पशुपतिप्रसादमा प्रकाश घिमिरे अथवा चलचित्रका नायक खगेन्द्र लामिछानेको हनुमानको रूप धारण प्रकारान्तरले बहुरूपी कलाकै प्रभाव हो ।
हुनत: यस सिनेमामा हनुमान बन्न मुखौटो प्रयोग गरिएको छ । बहुरूपियाहरुले कुनै पनि रूप धारण गर्न मुखौटो प्रयोग गर्दैनन् । वस्त्र र मुख शृंगारद्वारा चरित्र निर्माण गर्छन् । मूलरूपमा बहुरूपियाको चरित्र निर्माण विधिलाई प्रयोग नगरे पनि चारित्रिक प्रवृत्ति पशुपतिप्रसादका दुबै हनुमानको बहुरूपी नै छ । अर्को बहुरूपिया परिकल्पनाको सिर्जनात्मक प्रयोग महिलाको वस्त्र विन्यास, शरीरभाषा तथा भावमा लुगा बेच्दै गरेको खगेन्द्र लामिछानेको त्यो दृश्यमा देखिन्छ । यस्ता पात्रको विकासको प्रेरणा बहुरूपी कलाबाटै भएको देखिन्छ ।
सर्कसका जोकरहरुको स्वरूप र वस्त्र विन्यासका आधार बहुरूपी कला नै हो । प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक तथा कलाकार राज कपुरले ‘मेरा नाम जोकर’ मा बहुरूपिया कलाकै प्रभावमा आफ्नो गेटअप र चरित्रको परिकल्पना गरेका हुन् । ‘जिना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जिना कहाँ’ सिनेमाको गीत बिर्सन सकिँदैन । त्यसमा एउटा संवाद छ, ‘जगको हँसाने बहुरूपिया रूप बदलकर आएगा, लेकिन जिन्दगीमे बहुरूपिया फिर रूप नही बदल पाएगा’ यो मार्मिक संवादले सिनेमा दर्शकलाई भावुक बनाउँछ । सिनेमा त एउटा कला विद्या हो नै र बहुरूपिया विषयमै पनि धेरै सिनेमाहरु बनिसकेका छन् र पुरस्कृत पनि भइसकेका छन् ।
अहिले धार्मिक समारोहमा देउता वा देउताका वाहन वा दूतको रूपमा रूप र शृंगारसहित कलाकार प्रयोग गरिएको देखिन्छ । झाँकी प्रदर्शनमा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय नायकको स्वरूप धारण गरेका कलाकारहरु प्रयोग हुँदै आएका छन् । भारतमा स्वतन्त्रता दिवस अथवा गणतन्त्र दिवसको झाँकीमा धेरैजसो ठाउँमा महात्मा गान्धी वा जवाहरलाल नेहरुजस्ता नेताहरुको रूप धारण गरी झाँकी पदर्शनमा सहभागी हुन कलाकारहरु प्रयोगमा ल्याइन्छ । जनकपुरधामको मिथिला नाट्यकला परिषदद्वारा आयोजना हुने मैथिली विकास दिवसमा मिथिलाका सांस्कृतिक विभूतिहरुको स्वरूप नै बनाएर नगर परिक्रमा गर्ने चलन छ । त्यसमा जनक, जानकी, विद्यापति, सलहेस, लोरिक, दुलरादयाल, दीनाभद्री आदिको रूप प्रदर्शन गरिन्छ ।
जनकपुरका विवाह पञ्चमी, जानकी नवमी आदि उत्सवहरुमा रामजानकी, लक्ष्मण र हनुमानको रूप धारण गरेर झाँकी प्रदर्शन गर्ने चलन अद्यावधि छ । राजविराजको मैथिली साहित्य परिषद्‍द्वारा आयोजना हुने विद्यापति समारोहमा विद्यापति र उनका प्रिय सेवक उगनाको रूप धारण गरेर नगर परिक्रमा गर्ने अहिले पनि चलन छ । झाँकी प्रदर्शनमा ऐतिहासिक र लोकआस्थाका पात्रहरुको प्रदर्शनको प्रचलन नेपालका अन्य ठाउँमा पनि रहेको हुनसक्छ । मिनाप वा राजविराजको झाँकीमा प्रयोग हुने दक्ष र व्यावसायिक कलाकारहरु नै हुन् । धार्मिक महोत्सवहरुमा रामजानकी र लक्ष्मणको रूप धारण गर्ने अधिकांश अव्यावसायिक र बालबालिका हुने गर्छन् । स्वरूपमा निर्माण बहुरूपिया जस्तै यी कलाकारहरु पनि शृंगारकै माध्यमले गर्छन् । हनुमानको रूप धारण गर्ने मुखौटाको प्रयोग गर्छन् । बहुरूपिया कलाको गैरबहुरूपियाहरुद्वारा प्रयोग गर्ने चलन बढेको छ । यो बहुरूपिया कलाकै निरन्तरता हो । तर झाँकीका कलाकारहरुले रूप धारण गरे पनि अभिनय गरेको देखिँदैन ।
वर्तमान समाज र राजनीतिका लागि बहुरूपिया कडा व्यंग्यका रूपमा प्रयोग गर्ने शब्दावली बन्दै गएको छ । खास व्यक्तिको अलोचनाको क्रममा यो शब्दको प्रयोग हुँदै आएको छ । राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपका लागि बहुरूपिया एकप्रकारको गाली नै हो । गाली गर्ने र सुन्नेबीचको बुझाइमा कुनै अन्तर छैन । दुवैले बहुरूपिया शब्दको प्रयोगको प्रभाव समान रूपमा ग्रहण गरेका छन् । हुनत: राजनीतिक व्यक्तिका लागि अनेकौं विम्बहरु छन् । त्यसमध्येको बहुरूपिया प्रभावकरी विम्ब हो । राजनीतिक व्यक्तिको आन्तरिक चरित्र संशयमा रहेको हुन्छ । समर्थकहरु पनि आफ्नै नेताको चारित्रिक अविश्वसनीयताबारे अभिव्यक्ति दिइरहेको सुनिन्छ । आमजनता नेताका अनेकौं चरित्रको साक्षी हुँदै आएका छन् । प्याजको छिल्काजस्तै पत्रपत्र उघ्रिने खालको चरित्र नेताबाहेक अन्य कसैका लागि प्रयोग हुँदैन । यो मनोवैज्ञानिक विडम्बना हो । दर्शकहरुले बहुरूपिया कला हेर्दै गर्दा मञ्चस्थ राजनीतिक र सामाजिक नेतृत्वसँग तुलना गर्न पुग्छन् ।
यस्ता तुलनात्मक निष्कर्ष बहुरूपिया कलाकारभन्दा राजनीति र सामाजिक नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति बढी अब्बल रहेको मान्छन् । मनोरञ्जनका लागि एउटै प्रदर्शन गर्ने कला छैन । अनेकौं विद्या, शैली र रूपहरु छन् । यस्ता विद्याहरु जन्मनुको मुख्य कारण सामाजिक आवश्यकता हो । नत्र गीतले पुग्थ्यो, नाटक किन चाहिन्थ्यो र ? लोकसङ्गीतले पुग्थ्यो, शास्त्रीय सङ्गीत किन चाहिन्थ्यो र ? सबै विद्या र शैली तथा प्रदर्शनका लागि यो प्रश्न छ । यसमध्येका धेरै कलारूपहरु लोप भए तर धेरै जीवित नै छन् र फस्टाइरहेका छन,् के कारणले होला ? अरु पनि केही कारण होलान्, तर मेरो बुझाइमा यो समाजको आवश्यकतासँग जोडिएको विषय हो ।
आवश्यकताले नै कलाका यत्राविधि रूपहरु जन्मिए । समाजको लागि औचित्यहीन बनेपछि समाप्त भए । बहुरूपी कलाकारहरुले आफ्नो औचित्य गुमाउँदै गएका छन् । बहुरूपिया कलाकारहरु भन्छन्, ‘हाम्रा बहुरूपबाट अब दर्शक आकर्षित हुँदैनन् । हामीभन्दा दक्ष र क्षमतावान कलाकारहरु समाजमा छ्यासछ्यास्ती छन् ।’ बहुरूपिया हरुको यस्ता अभिव्यक्तिमा व्यंग्य छ । यो व्यवस्था र त्यसका सञ्चालनकर्ताप्रतिको कलात्मक व्यंग्य हो, जो पीडाको रूपमा छचल्किएको छ ।
बहुरूपिया कलाकारको विशेषता
बहुरूपियाहरुले विविधतापूर्ण चरित्र निर्माण र निर्वहनमा दक्षता प्राप्त गरेका हुन्छन् । भारतका चर्चित बहुरूपी कलाकार कृष्ण भन्छन्, ‘बाउन्न वटासम्म चरित्र बहुरूपियाले धारण गरी प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।’ अधिकांश पात्रहरु धार्मिक र ऐतिहासिक छन् । केही भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका पात्रहरु पनि बहुरूपियाले धारण गरिरहेको छ । बहुरूपिया कलाकारहरुको रुचि भनेको भय उत्पन्न गर्न सक्ने चरित्रतिर बढी देखिन्छ । यस्ता पात्र जो उग्र र भयावह छ । हिन्दुदेवी कालीको चर्चा गरिसकें । लैलाका प्रेमी मजनुको रूप र अभिनयको सम्झना पनि मसँग छ ।
मजनुलाई हेरेर बाटोका मान्छे भागाभागको अवस्था देखेको छु । च्यातिएको लुगा, रगताम्य जीउ र अनुहार । एउटा पागल प्रेमीको वस्त्र विन्यास, मुख शृंगार तथा शरीरभाषाको प्रयोग र संवादशैलीले सड़कमा आतङ्कपूर्ण अवस्था सिर्जना हुन पुग्छ । ‘लैला...लैला’ चिच्याउँदै गरेका कलकारका अभिनय त सडकमा अप्रत्यासितजस्तै देखिन्छ । सड़कमा केही व्यक्ति हुन्छन् जसले बहुरूपी कलाकारले प्रदर्शन गर्दै गरेको थाहा पाउँछन् । केही व्यक्तिको अनुकरण गर्दै सडकमा हिंड्ने बटुवाहरुले पनि थाहा पाउँछन् । सडकमा हिंड्नेलाई बहुरूपी कलाकारले यसैगरी दर्शकमा रूपान्तरित गर्छन् । बहुरूपियाले आफ्ना यिनै कला दक्षताका कारण लगभग पाँचसय वर्षदेखि दक्षिण एसियाली भूमिमा अस्तित्व बचाइराखेका छन् ।
बहुरूपिया कलाकारहरु मञ्च प्रयोग गर्दैनन् । सडक, भीडभाड हुने मेला, जात्रा यिनको प्रदर्शनस्थल हो । आफ्नो रूप, शृंगार, परिधान तथा संवादका माध्यमले आममान्छेलाई आकर्षित गर्छन् । तिनको जीवनशैली यायावरी हो । यात्रारत रहनु तिनका पेसागत आवश्यकता पनि हुनसक्छ । एउटा नगरमा गएपछि बहुरूपियासँग जे जति रूप धारण गर्नसक्ने क्षमता हुन्छ ती सबै रूपको प्रदर्शन गर्छन् । एक दिनमा एउटा रूप धारण गरेपछि दिनभरि प्रदर्शन गर्छन् ।
साँझ कुनै सार्वजनिकस्थललाई विश्रामस्थल बनाउँछन् । धार्मिकस्थल, धर्मशाला वा अन्य त्यस्तै स्थल जहाँ बसेबापत पैसा तिर्नु पर्दैन । कैयौं नगरमा वर्षमा एकपटक बहुरूपिया आउने परम्परा नै छ । यो बहुरूपिया को आफ्नै क्यालेन्डरअनुसार हुन्छ । ती नगरका बासिन्दालाई थाहा हुन्छ बहुरूपियाको रुटिनको विषयमा । प्रदर्शनको अन्तिम दिन कलाकारलाई स्वेच्छाले बक्सिस दिने गरिन्छ । अनौठो के छ भने विभिन्न रूपका माध्यमले कथा शृंखलाको निर्माण हुँदै जान्छ । सीताको हरण भएपछि रामले विक्षिप्त अवस्थामा ‘सीते...सीते’ भन्दै गरेको, अर्काे दिनको प्रदर्शनमा रावणले अशोकवाटिकामा सीतालाई आतङ्कित पार्दै गरेको वा लङ्का दहनबाट उत्पन्न आवेशसहितको रावणको प्रदर्शनले कथा शृंखलामा स्वाभाविक तारतम्य र गति आउँछ । । नियमित दर्शकले आज अन्तिम दिनको प्रदर्शन हो भने थाहा पाउँछन् । बहुरूपिया कलाकारले दर्शकलाई सूचना दिँदैनन् । चरित्र र कथा शृंखलाबाट सङ्केत पाउँछन् र बहुरूपियालाई आवश्यक बक्सिस दिने तयारीमा हुन्छन् ।
बहुरूपिया कलाको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो मुख–शृंगा् । पारम्परिक नाट्यशैलीमा मुखौटो महत्वपूर्ण सामग्री प्रमाणित भइसकेको छ । धार्मिक–ऐतिहासिक चरित्र निर्माणमा मुखौटोको प्रयोग हुँदै आएको छ । मुखौटो धारण गर्ने कलाकार मुखौटोभित्रको चरित्रलाई निश्चित ध्यान प्रक्रियाद्वारा आह्वान गर्छन् । कलाकारले चरित्र आत्मसात गरेपछि मुखौटो नाट्य उपकरणमा रूपान्तर हुनपुग्छ । धार्मिक, ऐतिहासिक चरित्रसहितका केही अनुष्ठानिक नाट्य वा नृत्यशैलीमा मुखौटो प्रयोगमा ल्याइँदैन । गाढा मुख शृंगार अर्थात् मुख पोत्ने गरिन्छ । अनुहारको पोताइ जापानी लोकनाट्य काबुकीको विशिष्टता हो । चिनियाँ लोकनाट्यमा पनि मुख पोताइ गर्ने परम्परा रहेको छ ।
दक्षिण एसियाली भूमिमा विकसित लोकरंगमञ्चमा पनि यस्ता शृंगारको चलन छ । संस्कृत रंगमञ्चमा यक्षगान, कुडिअट्टम, कथकली आदिमा मुखको रंग र सज्जाले मुखौटोको रूप र प्रभाव उत्पन्न गर्छ । बहुरूपी कलाकारहरुले मुखौटा प्रयोग गरेको देखिंदैन । आफ्ना निजत्वलाई अवसान गर्न शृंगारमाथि निर्भर रहने गर्छन् । अभिनयका कुनै शास्त्र अध्ययन गर्न नपाएका बहुरूपियाहरु सयौं वर्षको अनुभवले रंग प्रयोगमा दक्षता प्राप्त गरेका छन् । पृथक–पृथक चरित्रलाई व्यंजित गर्न भिन्न रंगहरुको समिश्रणसहित प्रयोग गर्छन् । मुखमा गाढा शृंगार गरेपछि प्रस्तुत् गर्न लागिएका चरित्र कलाकारको यथार्थ जीवनभन्दा टाढिन पुग्छ । दर्शकहरु साक्षीभावले अभिनेताको संसारलाई हेर्ने मनोविज्ञान बनाउँछन् । अभिनयमा निर्वैयक्तीकरण संभव हुनपुग्छ । अभिनयको यो चरम रूप हो ।
अभिनेताभित्र व्यक्ति बाँचुञ्जेलसम्म कुनै पनि शैलीमा उत्कृष्ट अभिनय वा अभिनेताद्वार चरित्रहरुको प्रभावी प्रस्तुतिको लागि वाधा उत्पन्न हुन्छ । मुख शृंगारका कारण मानवीय भावको अभिव्यक्ति भौंह, नेत्र र मुखमुद्राको माध्यमले हुनसक्छ । वाचिक र पद सञ्चालन वा हस्त सञ्चालनले अभिनयलाई झन् प्रभावकारी बनाउँछ । यस्ता अभिनय वैशिष्ट्य बहुरूपियाहरुमा देखिन्छ ।
भरत नाट्यशास्त्रले विभाजन गरेका नाट्यरूपअनुसार आंगिक, वाचिक, सात्विक र आहार्य अभिनय गर्न सक्ने परिपक्वता बहुरूपिया हरुमा देखिन्छ । बहुरूपिया अभिनयमा सुक्ष्म आंगिक र सात्विक अभिनय दर्शकले अनुभूत गर्न सक्दैन । त्यसको मुख्य कारण अभिनयस्थलको चयन हो । सडक, खुल्ला ठाउँ र दिनको समयमा बहुरूपिया हरु अभिनय गर्छन् । प्रकाशको कारण पनि कलाकारको सुक्ष्म अभिनय प्रकट हुन समस्या हुन्छ । मञ्चिय अनुशासन र सामग्रीको प्रयोग गर्न नसक्दा सुक्ष्म नाट्य अभिनयको अनुभूत गर्न सकिंदैन ।
बहुरूपियाहरुको अभिनयमा प्रकृतिले धरै सामग्री प्रयोग गर्ने सुविधा दिएको छैन । मुख शृंगार, वस्त्र र आभूषण प्रमुखतासाथ प्रयोग गर्दै आएका छन् । बहुरूपिया हरुको दक्षता पनि यिनै विधामा रहेको देखिन्छ । चारित्रलाई वैध बनाउन कलाकारहरु चरित्रलाई आत्मसात् गर्नुमै केन्द्रित हुन्छन् । अभिनय गर्ने चरित्रको परिकल्पनाको आधारमा तिनका शरीर, अङग–प्रत्यङ्ग, वाणी र चेतना अन्तर अनुभूत गर्छन् । कुनै पनि कलाकारले चेतनाको स्तरमा चरित्रमा रूपान्तरित भएको स्वयं अनुभूत नगरेसम्म वास्तविक र प्रभावशाली अभिनय संभव हुँदैन । यथार्थ र प्रभावशाली अभिनय अभिनेताको अन्तर्यबाट नि:सृत सिर्जनात्मक अनुभूति हो । अभिनेता आफ्नो निजत्व गौण पारेर चारित्रिक आवरणमा प्रकट हुन्छ । चरित्रको गुफाभित्र छिर्दै आत्मसात् गर्छ । बहुरूपीहरुले यिनै विशिष्टताको आधारमा अभिनय गर्दै आएका छन् ।
हुनत बहुरूपी अभिनेतालाई ‘नकलची’ पनि भनिन्छ । ऐतिहासिक र धार्मिक चरित्रको रूप धारण गर्ने र तिनै चरित्रको वैशिष्ट्यलाई दर्शकमाझ अनुभूत गराउने यिनको प्रयत्न रहँदै आएको छ । कुनै लोक मन र आस्थामा रहेका पात्रको हुबहु रूप धारण गर्नु र सोही अनुसारका अभिनय गरेकाले पनि नकलची भनिएको हुनसक्छ । नकलची कलाकार अहिले पनि छन् । नेपालमा चर्चित र व्यावसायिक रूपमा सफल, सेलेब्रिटी कलाकारको रूपमा नकलची कलाकारहरुले हैसियत बनाएका छन् । तिनका गुण भनेको समकालीन पात्रहरुको शरीरभाषा, हाउभाउ र आवाजलाई नक्कल गर्नु हो । नेपालमा यी कलाकारहरुले राजनीतिक पात्र र राजनीतिक घटनामाथि केन्द्रित प्रस्तुति दिँदै आएका छन् ।
अहिलेका नकलची कलाकारहरुलाई नक्कल गर्न धेरै समस्या देखिंंदैन । उनीहरुसँग समकालीन चर्चित चरित्रहरुको भिडियो अडियो पटकपटक सुन्नसक्ने प्रविधि उपलब्ध छ । आधारभूतरूपमा बहुरूपिया यिनीहरुभन्दा भिन्न छन् । बहुरूपियाहरुले प्रदर्शन गर्ने चरित्रलाई उनीहरुले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाएका छैनन् । देव वा ऐतिहासिक चरित्रहरुको शरीरभाषा, वाचनशैली, वस्त्र, आभूषण बहुरूपियाको आफ्नै परिकल्पना हो । त्यसैले बहुरूपियालाई नक्कल गर्ने कलाकारको श्रेणीमा राख्नु उचित हुँदैन । यिनीहरुले मौलिक कल्पनाशीलताका आधारमा रूप र अभिनयको निस्पादन गर्छन् ।
बहुरूपिया को अभिनय यथार्थवादी अभिनयशैलीका प्रयोगकर्तालाई अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ । आरोप लगाइन्छ बहुरूपियाको अभिनयमा अतिशयोक्ति हुन्छ । यथार्थ भनिनेभन्दा टाढा त छ यिनका अभिनय । तर सिद्धान्तत: यथार्थ ग्रहण र विश्लेषणका अनेकौं कोणहरु छन् । लोकनाट्य, परम्परागत वा संस्कृत नाट्य परम्परा अहिलेका यथार्थवादका प्रवर्तकहरुका लागि अतिशयोक्ति हुनसक्छ । यथार्थवादीशैली यस भूमिको उत्पादन होइन । त्यसैकारणले अभिनय आलोचना गर्दा भाव प्रकटीकरण र ग्रहणभन्दा पनि व्याकरण हाबी हुनपुग्छ । यथार्थवादीशैली विश्लेषणको कैयौं स्तर र रूप हुनसक्छ । सत्य वा यथार्थमात्र ऐन्द्रिक यथार्थले वाधित हुँदैन । ऐन्द्रिक यथार्थलाई मानव चेतनाको आत्मानुभूति र अभिव्यक्तिको सीमा निर्धारण गर्दा यथार्थ एकाङ्गी हुन पुग्छ । अभिनय रूप जटील र अर्मूत हुन पुग्छ । यस्तोमा यथार्थवादी पद्धतिबाट प्रस्तुति र सम्प्रेषण संभव नै हुँदैन । अलङ्कार, विम्ब वा प्रतीकको प्रयोग बाह्य सौन्दर्यमात्र होइन । अभिनयमा यी तत्वहरु त्यतिबेला सार्थक हुन्छ जतिबेला यथार्थ सौन्दर्यको अनुभूति हुन्छ ।
आधुनिक विज्ञानमा एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण र क्रान्तिकारी निष्कर्ष छ । त्यो हो– यथार्थ कुनै साँचो होइन जसबाट जस्ताको त्यस्तै निस्कोस् । यिनै कारणले हामी कुनै माध्यमबाट यथार्थ जान्ने प्रयत्न गर्छौं । अर्थात् हामीले बुझ्ने गरेको यथार्थ खास माध्यमबाट रूपान्तरित यथार्थ हो । यो विज्ञानका लागि जति सत्य छ त्यतिकै कलाको रूपमा पनि । यथार्थका विविध रूपलाई यथार्थवादी पद्धतिका माध्यमले जान्न सक्ने र सम्प्रेषित गर्न सक्ने भए साहित्य र कलामा फ्यांन्टासीको अविष्कार र सिर्जनात्मक वैधता हुँदैनथ्यो । नाटक र रंगमञ्चको लागि पनि यो प्रासङ्गिक नै हो ।
मानव आकृतिका माध्यमले सबैकुरा भन्न सकिने भए अभिनयमा वाचिक र अहार्य अभिनयको आवश्यकता किन हुन्थ्यो होला ? केही छ जो सामान्य मानव आकृतिभन्दा विशिष्ट छ । एक सीमासम्म मानवीय मुख–मुद्राका माध्यमले अभिनयलाई व्यंजित गर्न सकिन्छ तर त्यो सङ्कीर्ण र क्षणिक हो । धेरैकुरा मानवीय मुखाकृतिको परिधिमा छैन । फेरि मानवीय चेतनाभन्दा टाढा पनि छैन । बहुरूपिया कलाकारहरु चेतनाबाट चरित्रलाई नियन्त्रण गर्छन् । सुक्ष्म मुखाभिनय तिनको अभिनयको सवल पक्ष होइन । यथार्थको सङ्केत गर्न तिनले अभिनय परिवेश र अवस्थाअनुसार अतिशयोक्तिपूर्ण अभिनय गर्नै पर्छ । बहुरूपियाको अभिनय, रूप, शृंगारमा अतिशयोक्ति नै तिनको अभिनयको यथार्थ हो ।
बहुरूपिया कलाकारले अभिनय गर्ने चरित्रलाई विश्वसनीय बनाउन शृंगार र भेषभूषामा निर्भर रहने गरेका छन् । प्रसिद्ध नाट्याचार्य कोनस्तान्तिन स्तनिस्लाव्स्किले अभिनेतामा प्रभाव उत्पन्न गर्न आधा श्रेय रूपसज्जा र भेषभूषालाई दिने गरेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘रूपसज्जा र भेषभूषाले अभिनयलाई तिखार्छन् ।’ शृंगार अनुहार र शरीरको अन्य अङ्गहरुलाई सज्जित गर्ने कला हो । जसबाट अभिनय प्रभावी बन्छ । बहुरूपिया हरुले नत भरतका नाट्यशास्त्र अध्ययन गरेका छन्, न आधुनिक रंगमञ्चका व्याख्याकार गुरु स्तनिस्लाव्स्किको विचार र प्रशिक्षणबाट परिचित छन् । र, पनि अभिनयमा यस्ता सामग्री प्रयोगको ज्ञान कहाँबाट प्राप्त गरेका होलान् ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हुनसक्छ । बहुरूपिययाहरुले कसरी थाहा पाएका होलान्, शरीर अथवा अनुहारको छालामा रातो, नीलो र पहेंलोपनको गुण हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिको छालाको चमकको प्रकृति भिन्न हुन्छ । रूपसज्जाका माध्यमले छालाको त्यस्तै दोषलाई लुकाउने गरिन्छ । एउटा राम्रो रूप सज्जाकारले छाला विशेषको आधारमा रूपसज्जा गर्दा कृत्रिम प्रकाश र रंग, भेषभूषाको रंग, छाला, आँखा र कपालको रंग र अभिनेताको शरीरको बनोट र व्यक्तित्वजस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्छ । यो कला अभिनेताको रूपाकृतिको रूपान्तरण हो । यो जीवनसँग अत्यन्त निकटको कला हो ।
भेषभूषा र रूपसज्जा अभिनेताको बाह्य रूपरंगको अङ्ग हो । यसमाथि ध्यान केन्द्रित गरेर रूपरेखालाई तिखार्ने काम गरिन्छ । अभिनेताले गर्ने चरित्रलाई प्रभावशाली बनाउन सक्छ । आधुनिक नाटक प्रदर्शनमा रूपसज्जा र भेषभूषा नाटककारको परिकल्पना र निर्देशकको प्रस्तुतिशैलीअनुरूप हुने गरेको मानिन्छ । एउटा बहुरूपिया आफ्नो अभिनयको सम्पूर्ण जीवनकालमा नाट्यकारको परिकल्पना र निर्देशकको प्रस्तुतिशैलीबाट वञ्चित रहँदै आएको हुन्छ । र, पनि अभिनय तिखारिएकै हुन्छ ।
बहुरूपिया कलाकारले खासगरी समूहमा काम गरेको देखिंदैन । आजभोलि कतै कतै बहरूपिया कलाकारहरुले समूह निर्माण गरेर मनोरञ्जक कार्यक्रम गरिरहेको देखिन्छ । तर यसको परम्परागत स्वरूप एकल कलाकारकै प्रदर्शन हो । एक्लो अभिनेताले आफ्नो अभिनयको प्रभावकारितासँगै आफ्नो वस्त्र र रूपसज्जालाई यति प्रभावशाली कसरी बनाएको होला ? आफ्नो शरीर, छालाको रंग, वस्त्र र आभूषणको छनोट, त्यसको रंग संयोजन कसरी गरेको होला ? अभिनय प्रदर्शन गर्न मञ्च छैन । प्रकृति र सूर्यको मौलिक रंगसँग तालमेल गर्नसक्ने तिनको रूपसज्जाको ज्ञान कसरी विकसित भएको होला ? मलाई रहस्यात्मक लाग्छ ।
आधुनिक रंगमञ्चमा प्रकाश व्यवस्थाको आधारमा रूपसज्जा हुन सकेन भने ताप सहन गर्न नसकेर मेकअप पग्लिएको अनेकौं उदाहरण भेटिन्छन् । दाह्री–जुँगा बनाउने क्रेप गम सही ढंगले प्रयोग भएन भने अभिनेताको मुखबाट मञ्चमै जुँगादाह्री झरेको पर्याप्त उदाहरण छन् । बहुरूपिया को अत्यन्त तीव्र शरीरभाषा, पद सञ्चालन र अतिशयोक्तिपूर्ण संवाद भए पनि यिनको मेकअप बिग्रिएको उदाहरण छैन । नेपाल तराई वा भारतको राजस्थान लगायतका प्रान्तमा दिनमै प्रदर्शन गर्ने यी कलाकारहरुले ४० डिग्रीभन्दा माथिको तापक्रममा प्रदर्शन गर्दा पनि किन मेकअप पसिनाको रूपमा बगेर जाँदैन ? जुँगादाह्रीमा प्रयोग गरिने गमको केमिकल किन पसिनाबाट बिग्रिंदैन ? कलाकारहरुको ज्ञान आर्जन र हस्तान्तरण प्रक्रियाबारे अध्ययन नभएसम्म यस विषयमा केही भन्न सकिंदैन ।
अतिशयोक्तिपूर्ण प्रदर्शनको पर्याप्त चर्चा भइसकेको छ । दक्षिण एसियाली भूमिमा व्यापक प्रभाव रहेको पारसी शैलीको विशिष्टता पनि अतिश्योक्तिपूर्ण अभिनय हो । बहुरूपियाहरुको अभिनयमा पारसी थिएटरको गहिरो प्रभाव छ । यसो भन्नुको मुख्य कारण हो प्रदर्शनको स्तरमा दुबैमा समानता हुनु । पारसी थिएटर यस भूखण्डकै प्रभावशाली व्यावसायिक थिएटर थियो । यस थिएटरमा काम गर्ने कलाकार प्रशिक्षित थिए । प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता सावित गर्ने कलाकार चर्चामा आउँथे । अनुकरण र प्रभाव ग्रहण सिर्जनात्मक क्षेत्रका लागि स्वाभाविक प्रक्रिया हो । साधनसम्पन्न पारसी थिएटरका कलाकारको अभिनय बहुरूपिया का लागि प्रेरक रहेको हुनुपर्छ । बहुरूपियाहरुले मेकअप र वस्त्र विन्यासका पारम्परिक विधि र माध्यम पारसी थिएटरलाई नै बनाएको देखिन्छ ।
चुना पोतिएको सेतो, पहेंलो, गुलाबी र नीलो अनुहार, आँखा र आँखीभौंमा सियाही अथवा काजलको प्रयोगले गाढा कालो रंगका रेखाहरु, गाला र ओठमा रातो गाढा रंगको प्रयोग, पारसी थिएटरका यी सबै विशेषता बहुरूपियाको रूप शृंगारमा पनि रहेको छ । पारसी रंगमञ्चमा अतिरञ्जनाको गुण हुन्छ । अतिरञ्जक अभिनयजस्तै अभिनेताले हात–खुट्टा अत्यधिक चलाउने, स्वरघात कृत्रिम हुने पारसी थिएटरको विशेषता हो । स्वर आरोहअवरोहका लागि निश्चित नियम नै निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
पारसी कलाकारहरुका अभिव्यक्तिमा कृत्रिमताका कारण भाव प्रदर्शनमा पनि कृत्रिमता हुन्छ भन्ने ठान्नु उचित हुँदैन । दर्शकको ठूलो संख्या र ध्वनि यन्त्रसम्म पहुँच नभएको अवस्थामा कराएर बोल्नुपर्ने अभिनेताको विवशता थियो । बहुरूपिया कला यस्तै परिवेशमा फस्टाएको हो । पारसी थिएटर गर्नेहरुसँग प्लोसोनियम थिएटरको आधारभूत र अस्थाई संरचना थियो । बहुरूपिया ले खुल्ला आकाश, असंख्य मान्छे र अनियन्त्रित हल्ला हुने ठाउँमा कला प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । टिकट काटेर कला प्रदर्शन हेर्न नआएका दर्शकहरुसँग आफ्नै कार्य व्यपार पनि छ र मेलामा आकर्षक खेल तमाशाहरु पनि छन् । यस्तोमा प्रदर्शनमा अतिरञ्जनात्मक रूप र मेकअप वस्त्र आभूषण चहकिलो र आकर्षक भएन भने किन दर्शक आकर्षित हुन्छन् ? त्यसैले पनि पारसी थिएटरका कार्य व्यपार र अभिनय तथा सज्जाका मूल अवधारणालाई बहुरूपी कलाकारहरुले आत्मसात् गरेको देखिन्छ । यसमा पुन: प्रश्न उठ्न सक्छ पारसी शैली विस्तार हुनुपूर्व नै बहुरूपी कला परम्परा रहेकोले पारसीबाट कसरी प्रेरणा ग्रहण गरे होलान् ?
कला पोखरीको जमेको पानी होइन । त्यो समयअनुसार सललल्ल बग्न सक्छ । बग्न नसके समाप्त हुन्छ । समयअनुकूल त्यसमा ग्रहण र परित्यागको प्रक्रिया चलिरहन्छ । यो सिर्जनात्मक गतिरोध भङ्ग हुने स्वाभाविक प्रक्रिया हो । समकालीन वातावरण र परिवेशबाट कलाका माध्यमले प्रभाव ग्रहण गरिरहेको हुन्छ । बहुरूपिया लोककलाकार हुन् । आमलोकमै तिनको जीवन व्यतित हुन्छ । तिनले समाज, समाजका द्वन्द्व, परिवर्तन र समाजको चाहना र इच्छालाई बडो मसिनोगरी अन्वेषण गरिरहेका हुन्छन् । तिनका प्रदर्शनमा नयाँ र समकालीन तर चामत्कारिक पात्रहरु पनि जोडिंदै गएका छन् । अर्थात् बहुरूपियाहरुले आफ्नो कलालाई प्रभावशाली र प्रतिस्पर्धी बनाउन पारसी शैलीको विशिष्टतालाई आत्मसात् गर्दै गएका हुन सक्छन् ।
बहुरूपियाको वर्तमान अवस्था
बहुरूपियाहरुको अवस्था चिन्ताजनक छ । बहुरूपिया नरहे बहुरूपिया कला कसरी रहला ? भारतमा वा विश्वस्तरमा बहुरूपिया कलाको नियमित रूपमै फेस्टिभल आयोजन हुने गर्छ । सरकारी र गैरसरकारी स्तरमा यस्ता प्रयत्न थालिएका छन् । संसारभरिकै बहुरूपिया हरुको उत्सवमा सहभागिता भइरहेको छ । अहिले महोत्सवले बहुरूपिया हरुलाई सडकबाट मञ्चसम्म ल्याइपुर्‍याएको छ । संसारभरिकै बहुरूपिया कलाकार एक ठाउँमा जम्मा हुने र प्रदर्शन गर्ने क्रम बढ्दो छ । स्वाभाविकरूपमा सिक्ने र सिकाउनेतिर पनि आकर्षित भइरहेको छ ।
बीबीसीका संवाददाता नारायण बारेठ आफ्नो रिपोर्टमा लेख्छन्, ‘पञ्जाब प्रान्तका बहुरूपिया कलाकार कृष्णले अमेरिका र युरोपसम्म प्रदर्शन गर्न भ्याएका छन् । कृष्ण स्पेनिस र फ्रेन्चहरुको रूप धारण गर्न सक्छन् । बहुरूपिया पुस्तैनी कला हो । तर अहिलेको पुस्तामा रुचि छैन । अर्थात् भविष्य अँध्यारो छ ।’
सांस्कृतिक एजेन्सीहरुले वर्षमा १/२ पटक उत्सव आयोजन गर्दैमा यो कलाको संरक्षण हुन सक्दैन । यस्ता उत्सवहरुमा एक दुईजना बहुरूपिया सहभागी हुँदैमा यो कला जीवित रहन सक्दैन । आम व्यक्तिसँग मनोरञ्जनको पर्याप्त विकल्प छ । यस्तोमा बहुरूपिया कलाकारसँग दर्शक निर्माण गर्ने मुख्य चुनौती छ । यस कलाको पुस्तान्तरण प्रमुख पाटो हो ।
भावीपुस्तामा यस कलाप्रति सम्मानको भाव र पेसागत आकर्षण नभएसम्म यो पुस्ताले स्वीकार गर्दैन । अर्को यस कलालाई समकालीन बनाउनुपर्ने वाध्यता पनि छ । राजनीतिक र सामजिक द्वन्द्वलाई समाउने र नयाँ चरित्रका माध्यमले प्रभवकारी प्रकटीकरण गर्न आफूलाई तयार गर्नै पर्छ । यी सुझावहरु यस कलालाई मृत्युको मुखबाट निकाल्ने अन्तिम प्रयत्न जस्तै हो । यस्ता कलालाई बजारसँग प्रतिस्पर्धामा पठाउनु भनेको आत्महत्याका लागि बाध्य पार्नु नै हो ।
नेपालको अवस्था झन् दारुण छ । नगरहरुमा बहुरूपिया कलाकारको प्रदर्शन देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय उत्सव, महोत्सवमा नेपालको प्रतिनिधित्व छैन । यसको अर्थ नेपालमा बहुरूपिया कला सकियो त ? मैले व्यक्त गरेको संभावनामा यथार्थ पनि हुनसक्छ । तर कुनै पनि कला रूप वर्षाैको श्रम र सिर्जनाको परिणति हुन्छ त्यो क्षय हुनु भनेको महत्त्वपूर्ण सम्पदा गुमाउनु हो ।
प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७८ १४:०६
‘लालबाबुजी...लालबाबुजी...’ भन्दै एउटा हुल बिनाअनुमति घरभित्र पसिसकेको थियो । ‘उठनोस्...उठनोस् तपाईं सुत्नु भयो भने मधेस सुत्नेछ । नेताका नेता मधेसका बेटा तपाईंको दर्शनका लागि आतुर हुनुहन्छ, र तपाईं मस्त निद्राको आलिङ्गनमा हुनुहुन्छ !’
आश्विन ३, २०७७ रमेश रञ्‍जन
नाम : लालबाबु । उमेर : पच्चीस । अविवाहित ।मधेस आन्दोलनका जुझारु पात्र ।कथा समाप्त हुँदाहुँदै नाममा ‘जी’ जोडिएर लालबाबुजी हुन पुगेका ।
लालसँग बाबु गाँसेनन् कसैले । न त गाउँले, न मधेस आन्दोलनका सहकर्मीहरु नै । बडो कृपा गरे भने बबुआ थपिदिन्थे अनि नाउँको पूर्ण उच्चारण गर्दा हुन्थ्यो ललबबुआ । मधेस आन्दोलन ताका उसको छातीसँग समुद्री छाल ठक्कर खाएर निशब्द हुन्थ्यो । हिँड्दा धरतीमाथि रोलर चल्दो हो कि जस्तो लाग्थ्यो । आन्दोलनको जीवन त यौवन (जवानी) को उम्लिरहेको रगतबाट पोषित हुन्छ । लालबाबुको शरीरको रगत मानौं मर्स्याङ्दीको पानी जस्तै बेगवान बग्थ्यो ।
भकभक गर्दै आफ्नो रगतको तापले उन्मत्त हुँदा आफ्नो आक्रोश प्रकट गर्ने स्थल खोरिहन्थ्यो लालबाबु । टाढाबाट धमारको असह्य आवाज सुनिन लागेको थियो । मसालबाट निस्केको कालो धुवाँको मुस्लो आकाशलाई नियन्त्रणमा लिँदै थियो । बारुदको विस्फोट रोकिएको थिएन । बारुदी गन्ध हावामा छरिएकै थियो । गोली गट्ठाको ध्वनि मन्द भई मानव चित्कारमा रुपान्तरित भइसकेको थियो ।
राजतन्त्रको किल्ला ढल्दै मधेस अत्यासिँदै ब्युँझियो । सर्वस्व हरणको आशंका यसै पनि मान्छेलाई व्यग्र बनाइदिँदो हो । पहिचानको प्रसाद र संघीयताको भेटी खानलाई कम्मर त दरो पार्नै पर्‍यो ।
लालबाबु टाउकोमा फेटा बाँधी ६ फिटे लाठी हातमा समात्दा उसको बुबा सुदामाको कलेजो घोप्टिन थाल्छ । आमा सबरीको दम फुल्न थाल्छ । दुवै बुढाबुढी छोरालाई केही भन्ने तरखर गर्दै के थिए, लालबाबु सिकुवालाई फलाल्दै आँगनबाट दलान र फेरि सडकमा निस्किसकेका थिए ।
आमा–बुबाको सम्बन्ध स्नेहसँग हुन्छ र सडकसँग सम्बन्ध बन्दछ बलिदानबाट । बा–आमाले बल गरेर मुखबाट निकाले– ‘सुन त सुन ।’ कल्ले सुनोस् कोही सुन्ने भए पो ! सुन्नेले आवाजको गतिलाई पछाडि छोड्दै बेपत्ता भइसकेका थिए ।
लालबाबुको नेताले भने, ‘लाठी कुनै हथियार होइन, न त फेटा सुरक्षा कवच । त्यसैले निर्वाध प्रयोग गरौं ।’ लालबाबुको लाठीको प्रदर्शन आन्दोलनमा चामत्कारिक थियो । नेताको आर्शीवादरुपी तेलबाट पोषित लाठीले पुलिसिया डन्ठालाई खुल्क्याइसकेका थिए । अन्दोलनको लठ्ठी सामु पुलिसको भद्दा र अनाकर्षक बाँदर नृत्य बेकार भइसकेको थियो । तर पुलिससँग आन्दोलनको आँधीसँग मुकाबिला गर्ने एउटा उपाय अझै थियो–बन्दुक ।
लालबाबुको छाती चौडा हुँदाहुँदै पनि दाहिने देब्रे बन्दुकको गोली छुन कष्ट मान्ने । कद उँचो भए पनि गोली छेडेर निस्कन नमान्ने । लालबाबु आन्दोलनको अग्रमोर्चामै थिए, तर गोली नछेडने शपथ खाएको जस्तो । गोलीले कैयौं छाती छेडे । कैयौंको अङ्ग–प्रत्यङ्गलाई भुइँमा झारे । कैयौंले आफ्नो शरीरको रगतबाट सडकको तिर्खा मेटाए । कैयौंको अपाङ्गको साक्षी बन्यो सडक । हत्या उत्पादित भइरहेका थिए सडकमा र भीड गाइरहेको थियो मृत्यु गीत । तर लालबाबुको बिजुली झैं चल्दै गरेको शरीर र सौदामिनीसरी चहकिलो लाठीमा विराम लागेको थिएन । कति पसली भाँचे, कति टाउका फुटाए न त उसको लाठीलाई सम्झना छ न त लालबाबुलाई नै । तर अचम्म हो उसको लाठी । नेताको भाषणलाई पहिलो चोटी एउटा लठ्ठीको पराक्रमले गौण र महत्वहीन बनाइदिएको थियो । गर्व र अभिमानले लालबाबुको छाती झन उँचो भएको थियो । ढक्क फुलेको बेलुनझैं ।
जिन्दावाद मुर्दावादको नारा निशान्त रातमा सुनेपछि उसको बुवा र आमा ब्युझिँए । आवाजलाई पछ्याउँदै लालबाबु सुतेको ठाउँमा ओछ्याननिर आए । जिउ, हात, गोडा फाल्दै पसिनाको झरीमा निथ्रुक भिजेको थियो, ‘लालबाबु–लालबाबु’ भन्दै आमाले छोराको जिउ हल्लाउँदै ब्युँझाइन् । आँखा नखोली ब्युँझियो । निद्रामै बरबरायो, ‘के भो फेरि कसैलाई गोली लाग्यो ?’ लालबाबुको श्वासको गति रेल जस्तै छुक...छुक...छुक...छुक...चल्दै थियो । हैट, ‘सपनीमा पनि खाली नारा जुलुस नै आउँछ तँलाई ।’ ‘के भो र !’ ‘क्यै होइन, सुत ! हनुमान चालिसा पढेर सुत्नू ।’ आमाको माया बोल्यो । ‘ऊ...। बेकार निद्रा बिगारिदिनुभयो’ अर्धनिद्रामै भन्यो उसले । फेरि कोल्टे फेरी घुर्न थाल्यो मस्त ।
आमाबुबा त आमाबुबा हो । ऊ सहिद बनाउन छोराछोरी जन्माएको हुँदैन न त पालन पोषण गरेको हुन्छ । सुदामा र सबरी आफ्नो छोराको करामत आफ्नै आँखाले देखेका थिएनन् । अर्काको मुखबाट सुनेरै दुवै तर्सिन्थे । सबरी कयौं पल्ट आफ्नो घरकी इष्ट देवीलाई लालबाबुको जीवनरक्षाका खातिर बोका बलि दिने भाकल गर्थी र सुदामा डिहबार (ग्रामदेउता) स्थान गएर दूध पिठो चढाउने भाकल गर्थे ।
आकाश सफा थियो । सखारै चराचुरुङ्गीहरु गुँड छाडिसकेका थिए । चराहरुको अवाजले लालबाबुको निद्रालाई असर पार्न सकेन । बाँसको टाटलाई चिर्दै सूर्यको किरण घरभित्र प्रवेश गर्‍यो । लालबाबुको जिउ ओछ्यानमा सखुवाको गोलियाझैं असरल्ल अवस्थामा थियो । उष्णता जतिजति बढदै गयो, उसको जिउमा तिखोपनाले कचमच बढाउँदै गयो । उठेर बस्यो । जसरी केही सम्झेको होस । रेडियो खोल्यो । राजनीतिका सहस्त्र पाइला, जसलाई गन्न र हेर्नका लागि लालबाबुमा दैवीय शक्ति चाहियो । साँझसम्म गर्द घमासान मच्चाउँदै थिए । माग त उही हो नि संघीय राज्य । पछि त मागमा पनि इँटामाथि इँटा खप्टिँदै गयो । तर रातभरिमै ढले ती चाङ लगाएका इँटाहरु । देशमा सातवटा संघ बन्यो । बेनामी । चुनावमा जोसँग दूतिहाईको तौल पुग्छ उसैले न्वारान गरुन आफ्ना प्रदेशका नाम ।
लालबाबुको छातीमा बेलुनसरी फुकेको हावा थोरै फुस्कियो । आफ्नो आङ् तन्कायो, जिउलाई जोडले हल्लायो । लठ्ठीतिर नजर लायो र थचक्क बस्यो । सम्झौताको चासनी चखाइदिएको थियो । हातमा थमाइदियो झिक्रा पैसा । घोर निराश थियो लालबाबु । आवेशको प्रहार ठाउँमा लाग्दैन, आन्दोलनमा गरिएको प्रहार निसाना चुकिएकै जस्तो लाग्यो । वाग्मतीले यस्ता सम्झौताका कैयौं पोकाहरु आफ्ना तेजाबी जलमा गालेको थियो । नाउँ निसान पनि सुरक्षित छैन ती कागजका पोकाहरुको । काठमाडौंको सत्ताको अजिंगरले बेरिसकेको थियो लालबाबुका नेतालाई । लालबाबु आक्रोशको रातो चिन्ह पार गरिसकेपछि पनि नियन्त्रण गुमाएन, त्यसलाई कुशलतापूर्वक दिशा परिवर्तन गर्‍यो । उसको लठ्ठीले फेरि पनि आगो ओकल्ने हो भने यसको डाम आफ्नै नेताको जिउमा निस्कने पक्का छ । आवेशमा उसको मुखबाट बोलीसँगै थुकको मिश्रण निस्किरहेको थियो, ‘अब केही भनोस् न एक्कै लठ्ठीमा हड्डीलाई धुलोपीठो पारदिन्छु ।’
संविधानको पानामा संघीयताको अक्षर कोरियो । त्यो पनि सात प्रदेश । नारायणी र कोसीको मध्य भागको भूभाग कित्ताकाट गरी एउटा प्रदेश बनाइयो । दाइभाइको बाँडफाँडमा त विवाद हुन्छ । यो त देशकै बाँडफाँड हो । असन्तुष्टिको आगो विस्तारित हुँदै गयो । अन्ततोगत्वा आकाश अर्थात सत्ताको शिरबाट शीतल छिटा झर्यो र प्रज्ज्वलित अग्नि शान्त हुँदै गयो । अनि शान्त भयो लालबाबु पनि ।
रन्थनिएको मन । लठ्ठी छानामा घुसाएर राख्दै आमालाई भन्यो, ‘खाजा दिनू, खाइओरी बारी खन्दिन्छु ।’ छोराको परिवर्तित रुपलाई आमा विस्फारित नेत्रले नियालिरहिन् । विश्वासको संकटको दलदलबाट आमा निस्कने प्रयास गर्दै थिइन् । पुनः छोराको स्वर सुनियो, ‘मेरो मुख मात्रै हेरिरहनुहुन्छ कि केही खानलाई पनि दिनु हुन्छ ।’ आमाको गोडाहरुमा पाङ्ग्रा लागे जस्तो भो । सरासर सिधै भान्सा कोठामा पसिन् । कल्पना तरङ्गित हुन थाल्यो । आफ्नै घर आँगनमा छोरालाई हेरेर आमाको मन प्रफुल्लित थियो, ‘छिट्टै बिहा गराइदिन्छु । नाति नातिना हुन्छ । केटा घर गृहस्थीमा अल्झिए भने राजनीतिक पिशाचबाट छुटकारा पाउँछ ।’
पहिलोचोटी आमाको सोचभन्दा फरक सोचिरहेको थिएन लालबाबु । ढोंगी, फटाहा, फरेबी, धोखेबाज, राजनीतिको लागि यस्तै शब्दावली थियो लालबाबुसँग । ‘साला, मेरो टाउकोमा फेटा थियो कि कफन ? सहिदको पिण्ड पानीमाथि राजनीति गर्ने ? समय बर्बाद गरेको रहेछु, बरु आफ्नै घर परिवारको विषयमा सोच्दा हुने हो ।’
लालबाबुको आफ्नै नेतासँग असन्तुष्ट हुने खासै कारण थिएन । राजनीतिको अर्थ शान्त र स्तब्ध हुनै सक्दैन । लालबाबुको बुझाइ थियो, राजनीतिको अर्थ संघर्ष र संघर्षको रुप आन्दोलन न हो । न त भिक्षा न त कोसेली । दुवैलाई छुत मान्दथ्यो लालबाबु । राजनीति सत्ताका लागि सम्झौतामा अडकिने खेलको चरम आनन्द हो । लालबाबु जस्ता उग्र ब्याट्री त डिस्चार्ज हुनु नै थियो । डिस्चार्ज भई शान्त थियो लालबाबु ।
चुनाव जस्तो सुकै मरियल राजनीतिक कार्यकर्तालाई पनि बलाढ्य बनाउँछ । चुनाव राजनीतिको कुम्भ नै हो । तर लालबाबुसँग न कमण्डलु न रामनामी च्यादर अनि के काम कुम्भको । झन चुनावको कुरा उठ्दा झोक्किन्छ, फलाक्न थाल्छन्, ‘म गाई पाल्छु, भण्टा उब्जाउँछु तर यिनीहरुको चुनावी जञ्जालमा फस्तिनँ अब ।’ अरुको थाहा छैन, तर छोरा मुखले यस्ता बोलीबाट आमाबुबाको पाप्रिएका ओठहरु रसिलो हुन थाल्छ । खुशीले आँखा उज्यालिन्छ । केही दिनमै बुहारी र नाति नातिनाको रोदन क्रन्दनको कल्पनामा तर्रर आँसु झार्छ दुवै ।
चुनावी नगरामाथि चोट हानिन थल्यो । पार्टीहरु गाउँघरमा चियाउने ओर्ने गर्न थाले । पस्कने र खानेहरुको सूची तयार हुन थाले । टिकटका लागि दौडधूप र शक्ति संघर्ष हुने भई नै हाल्यो । चुनावमा लगौँटी कसेर अखडामा ओर्लेका पहलमानहरु धेरैजसोले आन्दोलनमा लठ्ठी टल्काएका थिएनन् । नोटको गड्डीले नेताहरुलाई छोप्ने क्षमता भएकाहरुले नै टिकटको लालगोटी छुन पाँए ।
भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीले गाउँका सडक धुलैधुलो भयो । मध्य दिउँसोको प्रचण्ड घाममा लालबाबुको आँखा झपक्क मात्र के गरेको थियो त्यसैबेला द्रुतगतिमा आएका गाडीका हुल (ताँती) ब्रेकको दबाबयुक्त ध्वनिका साथ रुक्यो । लालबाबुको कानले सहन गर्न सकेन, आँखा उघ्रियो ।
जिन्दावाद...जिन्दावाद, एकपटक पनि मुर्दावाद सुनिएन । छक्क परेको थियो लालबाबु, यो कसको समर्थनमा नाराबाजी भइरहेको छ ? पहिला एउटा मसिनो स्वर अनि समवेत स्वरमा मधेसको योद्धा भनेर सुनिन्थ्यो । ओछ्यानमा स्वाङ पारेर घुर्न थाल्यो । पुरा मधेस त युद्ध मैदान नै थियो । जताततै योद्धाहरु थिए । अहिले कुन योद्धाको जिन्दावाद भइरहेको छ त्यो लालबाबुको टाउको दुखाइ भएन । चालीस डिग्री सेन्टिग्रेट तापमानका बाबजुद पनि आफ्नो मुख च्यादरले ढाक्नै उचित ठान्यो लालबाबु ।
लालबाबु प्वाक्क ठाडै भन्यो, ‘यहाँ धेर नारा जुलुश अनावश्यक नगरम । तपाईंहरु जानोस ।’ तर नेता भनेको नेता नै हो । त्यस्तो नेता के नेता जसमा चातुर्य नहोस । उनी पहिला आफ्ना बानर दललाई पठाए । पठाउन पठाए पनि नेताजीलाई थाहा थियो यो दलले सेतु बाँध बाँध्न सक्दैन । त्यसपछि, नेतारुपी त्यो सौम्य मूर्तिको इन्ट्री भयो । कमालको इन्ट्री । तिनको वस्त्र वर्णनको आवश्यकता छैन । चुनाबी नेताहरुको वस्त्र विन्यासमा प्रायः एकरुपता हुन्छ । तर इत्र ! के कुरा गर्नु, सयौं मान्छेको भीड चिर्दै लालबाबुको नाकसम्म पुग्यो । जोडले टाउको झटकार्यो उसले । भीडले बुझे लालबाबु नाकमाथि बसेको झिँगा धपाउन खोजेका छन् ।
तर स्क्रिप्टअनुसार गजबका अभ्यास गरेका थिए नेताजी । लालबाबुको गृहमा प्रवेश त गर्‍यो तर लालबाबुको कोठामा पसेन, सोझै आमाबुबा बस्ने कोठामा गयो र आमा सबरी र बुबा सुदामाको चरणमा आफ्नो सम्पूर्ण अंगलाई धरतीमा स्पर्श हुनेगरि ढोग गर्‍यो । चिन्ता गरेन बगुल्लाको प्वाँख जस्तो सेतो कपडामा दाग बस्ला भनेर । बूढाबूढीका लागि अप्रत्याशित थियो यो घटना । तर लालबाबुले कान कन्याउने काम गरेन । नेताजीसँग तुनिरमा दिव्यास्त्रको कमी थिएन । त्यो नभएको भए त कुनै आन्दोलनको योद्धाको ललाटमा टिकट नटाँसी यिनकै मस्तिष्कको मणि किन बन्थ्यो र ! लठ्ठी घुमाउनु र नोटको गड्डी फरफराउनुबीच के मुकाबिला हुनु ।
नेताजी हतारमा थिएन । सबभन्दा पहिला त आमाबुबाको स्तुति गान गरे । ‘आहा... ! मेरो मनमा लालसा थियो, यहाँहरुको दर्शन गर्ने । चुनाव जित्नु जानकी दर्शन वा गंगा स्नान होइन । तर हजुरहरुको दर्शनबाट दुवै प्राप्ति भइसक्यो । अझ चारधामको दर्शनको फल प्राप्त गरे मैले ।’ त्यसपछि नेताजी आफ्नो आवाजको भोल्युम बढाउँदै लगे, ‘धेर भयो भने के हुन्छ, लालबाबुजी मेरो प्रचारमा जानु हुन्न । मधेसको योद्धा मधेसी उम्मेदवारको प्रचारमा नगए पछि चुनाव हारिन्छ । अनि मेरो हार मात्रै हुन्छ त, मभन्दा ठूलो हार त लालबाबुजीको हुन्छ । केही छैन यस्तो महान योद्धाको मातापिताको दर्शन पाएर म धन्य भएँ ।’
आमाबुबाको कण्ठ अवरुद्ध भयो । अक्क न बक्क टुलुटुलु हरिरहे नेताजीलाई । तर यहाँ नेताजीको अनुमान गलत सावित हुँदै थियो । नेताजीको अनुमान थियो कि आमाबुबाको नयनबाट नीरको झरना झरझर प्रवाहित हुन थाल्नेछ । परिणामस्वरुप लालबाबु पनि भावुक हुनेछ । तर लालबाबु बिछ्यौनामा योगसाधक जस्तै पूर्ववत आसन जमाइराखे । अब नेताजीको सिधा प्रवेश थियो लालबाबुको बिछ्यौनासम्म । खोटोले टाँसिए जस्तै दुवै हात जोडेर, शिर निहुराएर, लालबाबुको ओछ्यान तल आसन जमाए ।
मबाट आश नगर्नुस । राजनीति मलाई धेरै छुच्चो लाग्छ । बरु भोट मागे दिइहाल्छु । नेताजीलाई थाहा छ, घ्यू तापबिना पग्लिदैन । नेताजीलाई आगो झन प्रज्ज्वलित गर्नु पर्ने आवश्यकताको अनुभूति भयो, ‘चुनाव त तपाईंले लडनु पथ्र्यो । तपाईं आन्दोलनको योद्धा हुनुहुन्छ । टिकट दिने बेलामा भन्नु भएको थियो । आहा...! कति माया र सम्मान गर्छ तपाईंलाई हाम्रा माथिल्ला नेताले । लालबाबु अगाडिको सिटमा बस्यो भने मात्र प्रचारमा निस्कनु अरे ! नत्र भने घोप्टो परेर अन्न पानी सबै परित्याग गर्दिनू, सिकुवाबाट नउठ्नू ।’ नेताजीको यस योजनाको वृतान्तसहित प्रकट गर्ने काम गरेको थियो उनैको सहयोगी ।
लालबाबु राजनीतिका यस्ता अन्तरकुन्तर जान्ने मान्छे थिएन । चुनावको व्यापारीकरणबारे अज्ञानी नै थियो ऊ । चुनावी ब्राण्डलाई नाउँ चाहिन्छ । आकर्षक प्याकिङ चाहियो । विज्ञापन चाहियो, अनि मात्र उपभोक्तासम्म उत्पादनको पहुँच बन्छ । ब्राण्डको नाम त भेटिसकेको थियो, पार्टीको रुपमा । प्याकिङको आकर्षण र विज्ञापनको लागि आकर्षणयुक्त मोडेल त चाहियो । यसपालिको चुनाबमा लठ्ठीधारी लालबाबुभन्दा आकर्षक र प्रभावशाली मोडेल को हुन सक्थ्यो र ! नेताजी पूर्ण आसनमा जमेको थियो । काटीकुटी अनुलोमबिलोम र कापालभाँतीवाला मुद्रा ।
साहन बाहनका दल पनि सजग र सचेत थिए । नेताजी मौन । चेलाहरुहरु जिब्रो खचखच छुरा जस्तै चलिरहेको थियो, ‘अँ, यहाँले हाम्रो नेताजीको जिद्दी हेर्नु भएको छैन । अनशनमा डाक्टरको स्लाइन पनि लिनु हुन्न ।’ अर्काै प्याच्च बोल्यो, ‘जुस पनि हउ ।’ उम्मेदवार महोदयको अनशन कौशलबारे बखान सुरु भयो । बीचबीचमा चिम्रे आँखा लाएर लालबाबु तिर उनको परिवर्तित हुँदै गरेको मुद्रालाई पढने कोसिसमा थिए उम्मेदवारजी । परिवर्तनका समान्य रेखा पनि उनलाई उत्साह प्रदान गरिरहेको थियो । लालबाबुको मुहार अन्ध्यारो हुनु उज्यालिनुमा नेताजीको रक्तगति नियन्त्रित भइरहेको थियो । लाटो भइरहेको आफ्नो गोडालाई चित बुझाउने प्रयास गर्दै मनमनै भन्दै थिए, ‘एकैछिन अरु बर्दास्त गर, मात्र एकैछिन ।’ यसो त मन गर्थ्यो औला थिचौं थिचौं क्यारे, तर त्यसो गर्ने अवस्था थिएन । नेताजी शारिरीक पीडालाई दबाउँदै घण्टौसम्म लालबाबुको बिछौना तल बसिरहे ।
लालबाबु ढुङ्गा र फलामले बनेको त थिएनन् । तापले उ पनि पग्लिँदै गइरहेको थियो । त्यो हिउँको थुप्रो बुँदबुँद खिइरहेको कुरा नेताले नबुझी गोठालाले बुझ्ने हो र ! नेताजी घरीघरी आफ्ना आँखालाई चिम्म पारिरहन्थे, मष्तिष्कलाई नियन्त्रित गर्थे, अनि गोडा मिच्नका लागि घस्रिएर अगाडि बढदै गरेको हातमाथि कस्सिएर बे्रक लगाउँथे ।
यसो त नेताजी साह्रै कष्ट गरेर नेता बन्नु भएको थिएन । शारिरीक कष्ट त उनको सात पुस्ताले गरेको थिएन । घण्टौ देखिको योगासन उनको अन्तर आक्रोशलाई भडकाइसकेको थियो । अरे लालबाबु नभए, पहेलोबाबु, सेतोबाबु, कालोबाबु, हरियोबाबु यस्ता विकल्पका विषयमा उनको दिमाग कसरत गर्न थालेको थियो । नेताजी सोच्न थाले, ‘आँ, बेकारमा नसा सुन्नियो ।’ उहाँलाई आफ्नो करामाती दिमाग र क्यासमाथि भरोसा थियो । भित्रदेखि कचमच बढेको थियो । त्यसका लक्ष्णहरु मुहारमा प्रस्ट देखिन थालेको थियो । पसिनाका बुँदहरु तालुमाथिबाट मुखाकृतिसम्म निर्वाध यात्रा गरिरहेका थिए । अनुहार ओइलिएर बिस्तारैबिस्तारै कोइलाको आगो जस्तै दन्किन लागेको थियो । चुनावमा जे भए पनि यी शारिरीक कष्टपूर्ण अवस्थाबाट मुक्त हुन उनले सोच बनाइ सकेका थिए ।
कि आकाशमा चट्याडको गडगडाहट सुने जस्तै भयो, ‘यस्तो पनि कुरा हुन्छ । जतिबेला धरना अनशन हुन्थ्यो तपाईंको छाया पनि देखिएन, अनि आज...अनशन गर्नु हुन्छ । बिनातुकका कुरा । म त भनिसकेको छु गाई पाल्छु, भण्टा उब्जाउँछु तर राजनीतिको लफडामा पर्दिनँ । थेच्चर मान्छे । न लाज छ न विचार । बसिरहन्छु रे भोकै ।’ नेताजी यस्तै शब्दको प्रतिक्षामा थिए । लालबाबुको कडा प्रतिक्रियाबाट उनी झन आशावादी भए । बाँधिएको पानीलाई खलास हुनै पर्छ । त्यसपछि निर्विकार भावले केहीबेरसम्म लालबाबुलाई सुन्नका लागि आफूलाई पुनः तयार गरेँ, ‘म छु मन्तर गर्दिन्छु क्या चुनावमा ? कि छुमन्तर हुने हो तपाईंको लक्ष्मीबाट । वाहियात पेटलाई दुख दिइराखेको । जाबो म नभई यिनका चुनावी खेतहरु अफल रहिहाल्छ भनी ठान्छन् । भो, अब धेरै स्वाङ नपार्नुस्, जाओ कहाँ जानु छ ?’
नेताजीको कानले छलेको थिएन । ‘जाऔं’ उहाँले स्पष्ट सुन्नु भएको थियो । लालबाबु ओछ्यानबाट उठनुभन्दा पहिला नै नेताजी आफ्नो आसनबाट उठेर उभिसक्नु भएको थियो । नेताजीले बोले छिटो ! एउटा सहयोगी दौडिँदै गयो र धूपदीप आरती एवं प्रसादको रुपमा मोतीचुर लड्डुको प्याकेटका साथ तुरन्त उपस्थित भयो । सँगै नववस्त्र । नेताजी विनम्रतापूर्वक लालाबाबुलाई भने, यो वस्त्र लाउने कृपा गर्नुहोस् । कुनै बेला आँखा झप्काउँदै, चिम्म पार्दै, त कहिले ओठ टोक्दै लालबाबु शुद्ध नेतासरी वस्त्र धारण गर्‍यो । घरको एक कुनामा थन्काइएका लठ्ठीलाई गमछाले पुछपाछ गरी अर्का सहयोगीको हातमा दियो । उसले त्यो ६ फिते लठ्ठी हातमा अँठ्यायो । नेताजीले बडो मनोयोगपूर्वक उसको आरती र पूजा गरे ।
सबभन्दा पहिले लालबाबुको मुखमा लड्डु कोच्ने काम भयो, त्यसपछि अरु बाँकीले पनि लड्डु ग्रहण गरे । यसमाझ कैयौं मोबाइलका फ्ल्‍यास टल्किरहेका थिए । सम्पूर्ण प्रकरणको फोटो, भिडियो र नेताजी र लालबाबुसँगको सेल्फीको वर्षा हुन लागे । दर्जनौं मोबाइलका डाटा अन थिए । सबैलाई पोस्ट गर्न हतारो । नारा गुञ्जियो, त्यसले लालबाबुको खरको छानो उडाइदेला कि जस्तो लाग्थ्यो । मधेसका लाल लालबाबुजी जिन्दावाद जिन्दावाद ! नारा लगाउनेमा थकानको कुनै लक्षण नदेखेर लालबाबुबाट लालबाबुजी बनेका ऊ लठ्ठीसहित घरबाट निस्कियो । नेताजीसहित ती हुल पनि निस्के ।
आकाश अनुगुञ्जित थियो नाराले । घर अगाडिका एक कुनाबाट सुदामा र सबरी यस दृश्यको दर्शक बनेका थिए । छोराको शरीरका परिधान त नयाँ थिए । तर बेहुलाको न टोपी थियो न परिधान श्रीपेच शिखाको ठाउँमा त्यै फेटा र लठ्ठी थियो । त्यो भीड पनि जन्ती थिएन । सुदामाको मुटु पल्टिरहेको थियो, सबरीको दममाथि नै झुण्डेको थियो ।
अनुवाद : बिनोदानन्द
प्रकाशित : आश्विन ३, २०७७ १६:०४